धरान । धरान –१६ स्थित शारदा बालिका नमुना विद्यालय धरानकै पुरानो विद्यालय हो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनु भन्दा २ वर्ष अघि धरानमा यो विद्यालय स्थापना भएको हो । अर्थात २००५ सालमा विद्यालयको स्थापना भएको हो । नेपालमा राणा शासन हँुदा हुँदै पनि छोरीलाई पनि शिक्षाबाट वन्चित गर्नु र गराउनु हुँदैन भन्ने उद्धेश्यले यसका विद्यालयको स्थापना गरिएको. हो । छोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले विद्यालयको स्थापना भई अहिले सम्म पनि छोरीलाई उच्च शिक्षा सम्म अध्ययन अध्यापन गर्दै आएको छ । तत्कालिन अवस्थामा धरानको पव्लिक विद्यालयले छोरालाई मात्रै अध्यययन गराउने गरि स्थापना भएको थियो भने शारदा विद्यालयले भने छोरीलाई पढाउनको लागि स्थापना गरेको थियो । तर पव्लिक विद्यालयले छोरा र छोरी दुवैलाई पढाउन थालेको छ । शारदा बालिका नमुना विद्यालयले अहिले सम्म पनि सोही मान्यतालाई आत्मासात गर्दै अध्ययन गराउँदैछ । साढे ४ विगाह भन्दा वढी जग्गामा सुविधा सम्पन्न भवन ,प्रविधीयुतm पठनपाठन यस विद्यालयमा हुने गरेको छ । प्रस्तुत छ , शारदा वालिका नमुना विद्यालय धरान १६ का प्रधानाध्यापक इन्द्र बहादुर राईसँग औजार दैनिक धरानले गरेको कुराकानी ः–
१. कोरोनाको चौतर्फी संक्रमण र भयभवह स्थिति छ,यस्तो अवस्थामा पठनपाठनमा पनि ठुलो असर गरेको छ,हैन ?
अहिले वास्तवमा के रह्यो भने सबैभन्दा ठुलो मार हेर्दाखेरि शैक्षिक क्षेत्रमा परेको छ । त्यसले भोलिका कर्णाधारहरु अगाडि बढाउने कुराहरु लथालिङ्ग बनाईदिएको छ । शैक्षिक क्षेत्र बन्द हुनुको कारण धेरै बिद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौेलमा समेत पर्न गयो । तर जस्तो अवस्था हुँदा पनि अहिले हामीले एसईईको परिक्षाको रिजल्ट बिधार्थिको आन्तरिक मुल्यांकनको तवरबाटै सार्वजनिक गरेका गरिसकेका छौ ।
३. कस्तो रहयो रिजल्ट ?
रिजल्ट अब विद्यालयबाटै बनाएर लगेको हो । जस्तो पठाईयो त्यस्तै आयो । सबैको रिजल्ट बिद्यालय भित्रैबाट लाने कुरा भयो । सोहि अनुसार बिद्यार्थीहरुको रिजल्ट पनि आयो । रिजल्ट पनि बिद्यार्थीहरुको योग्यताको आधारमा मुख्यतय उनीहरुको हाजिरिको आधारमा उनीहरुले दिएको तीनवटा परिक्षा प्रथम ,दोस्रो परिक्षा र प्री एसईई भन्छ त्यसैको आधारमा पनि हामीले रिजल्ट तयार पा¥यौं । जसको लागि एउटा वर्ग शिक्षक बिषय शिक्षक र प्रध्यानाध्यापक तिनजनाको टोलिले अन्तिममा परिक्षा बोर्डले पठाएको फर्मेट अनुसार रिजल्ट तयार पारि सार्वजानिक गरियो ।
४. त्यसो हुँदाखेरि बिद्यार्थीहरुको वास्तविक रिजल्ट आउन सक्यो कि सकेन त ?
त्यो त अवस्य सकेन ।सत्य कुरालाई हामीले सकेनौं नै भन्नुपर्छ ।
अवसरको कुरा भयो । किनभने एसएलसिलाई स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट अथवा परिक्षालाई अहिले एसईई भनि भनिएको छ । अब कक्षा १० को परिक्षालाई त्यत्ति महत्त्व पनि दिदैन ।अब कक्षा १२ लाई बढि महत्त्व दिन थालिएको छ । तर एउटा कुरा के हो भने सदाको जस्तो तरिकाले बिधालयले तयारी गरेका थियो र बिधार्थिहरुले पनि तयारि गरेका थिए। तर त्यो अन्त्यमा हुन सकेन रिजल्ट अर्कै हिसाबले आईदियो । जसले बिधार्थीहरुमा सन्देश चाहि के दियो भन्दा राम्रै नतिजा ल्याएका छन् ।उनीहरुले तर पनि सरहरुले यो पठाएको हो,स्कुलले पठाएको हो भन्ने एकखालको नकारात्मक धारणा भयो। पढने बिधार्थीहरुका लागि यसप्रति त्यो खालको धारणा आएको हुन सक्छ तर नपढ्ने बिधार्थीहरुका लागि भने यो अवसरै जस्तो पनि भयो ।
६. कोरोनाको भयभवह अवस्था छ,बिद्यार्थीहरुको पठनपाठन गर्न समस्या नै छ हैन ?
करिब करिब बन्द अवस्थामै छ । अहिले बिशेष धरान उपमहानगपालिका भित्र सरकारी बिधालयहरु बिशेष ४ वटा सहित ४९ वटा जम्मा रहेको छ । तिनै बिधालयहरुको सयुक्त बैठकले शिक्षा महाशाखाको निर्देशन अनुसार अहिले बिधार्थी सिकाई सहजिकरण निर्देशन २०७७ जारि गरेको छ ।
त्यसले करिब ६ वटा देखि ७ वटा सम्मको विकल्पहरु दिएका छन् । पाहिलो विकल्पको रुपमा अनलाईन कक्षा , त्यसको लागि हाम्रो सामुदायिक बिधालयमा अनलाईनसङ्ग पहुँज पुगेका बिधार्थिहरु कत्ति छन भनेर स्टडि गरेका थियौ । सबैको डेटा लिदाखेरि १५ देखि २० प्रतिशत मात्र मुस्किलले पहँुचमा भएको पाईयो । त्यहाँबाट पछाडि टिभिबाट लिने भन्ने कुरा गर्दा खेरि पनि सामुदायिक बिद्यालयहरुमा ३० देखि ३५ प्रतिशत बिधार्थिहरु पहाडि क्षेत्रका रहेको र त्यहाँ टिभिको पहँुच नहुँदाखेरि त्यो पनि सम्भव भएन त्यस पछाडि एफएम रेडियो बाट पनि चलाउने कुराहरु आए । कत्तिले चलाए पनि र अर्को समुह समुहमा बनाएर टोल टोलमा भेला गराएर पढाउने भन्ने कुरा पनि उठ्यो र बिद्यालयमै प्रत्यक्ष पढाउने भन्ने कुराहरु पनि आए ।त्यसको निमित्त चाहिँ हामिले पहिलो तयारि गरेका थियौ ।
कक्षा ८,९ र १० लाई १५ दिन जस्तो पढाएर कोशिस गरि हेरौ भन्ने भयो ।त्यसैबेला ईनरुवामा त्यसको सुरुवात पनि भयो तर अभिभावकहरुले गएर हेर्दा त्यो अलिक खतरा जस्तो हुने भएर सिडिओले त्यो प्रकारको कक्षा सन्चालन नगर्न आदेश दिए । त्यसपछाडि हामिले त्यसको निमित्त कसरी जान सकिन्छ भनेर सम्पुर्ण शिक्षक, सल्लाहकार अभिभावक संघ व्यवस्थापन समिति सहितको उपस्थितिमा छलफल राख्दाखेरि धेरैजसो अभिभावकहरुले एकदिनमा एउटा मात्र कक्षा हुनेगरि प्रत्यक्ष कक्षा सन्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो र सोहि अनुसार हामिले सेडुल समेत तयार परेका थियौ तर प्रशासनबाट त्यसको जिम्मेवारी आफै लिनुपर्छ जस्ता कुरा आएपछि त्यो गर्न हामी असमर्थ भयौ र त्यसपछि हामीले अर्को बिकल्पमा नोट्स वितरण प्रश्नपत्र बनाएर सबै बिद्यार्थीलाई वितरण गरेका छौं ।
७. विद्यार्थीका लागि नोट वितरण गरेका छौं भन्नु भयो , यो कस्तो खालको शिक्षा हो ?
अहिले पाठ्यक्रमलाई १०० पुर्णाङ्कको बनाएको छ । पाठ्यक्रम बिकाश केन्द्रले नै यसलाई समायोजन गरेर ल्याएको हो । हामीले बिद्यार्थीहरुलाई गृहकार्य जस्तो नोट तयार पार्न दिन्छौ । त्यसको लागि प्रश्नपत्र समेत दिन्छौ र बिद्यार्थीहरुले तोकेको समय भित्र त्यो नोटलाई बिद्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
८. यो शिक्षा प्रभावकारी भएको छ त ?
हजुर निरन्तरता नै रहेको छ । त्यो सिकाई सहजिकरण अन्तर्गत गरिरहेका छांै । यो अन्य बिकल्पहरु भन्दा उपलब्धिमुलक रहेको पनि हामीले पाएका छौ । कक्षा ११ र १२ को पनि त्यस्तै भएको छ। रुटिङ निकालेर दिएको छ तर अब त्यो कार्यान्वयन हुने हो कि हैन हेर्न वाँकी छ ।
९. अब परीक्षा कसरी गराउनुहुन्छ ?
जसरी पनि परिक्षा गराउछौ । हामीसङ्ग परिक्षा सन्चालन गर्न प्रयाप्त कक्षाकोठाहरु छन । एउटा कोठामा १२ देखि १३ जनासम्म बिद्यार्थीलाई राखेर दुरि राख्ने हिसाबले परिक्षा र कक्षाहरु सन्चालन गर्न सक्छौ । त्यत्ति भएर पनि भएन भने हामीसङ्ग खुल्का ग्राउन्डहरु काफि छन्। त्यसैमा टेण्ड लगाएर पनि परिक्षा सन्चालन गर्न सक्छौ । परिक्षा संचालन गर्दा हेल्प डेस्क अनिवार्य राख्न भनिएको छ। त्यसको लागि बिद्यालयलाई एकजना डाक्टर र नर्स दिर्नु पर्छ । त्यसपछि हामी सोहि अनुसार परिक्षा सन्चालन गर्नेछौ । परिक्षा सन्चालनको लागि लगभग लगभग हामीले आवस्यक स्वास्थ सामाग्रीहरु तयार पारिसकेका छौ ।
पुर्व स्वास्थ्य चेकको लागि थर्मोगन खरिद गरिसकेका छौ । कक्षाकोठालाई सेनिटाईजिङ गर्नको निमित्त मेशिनको व्यवस्था गरिसकेका छौ । यदि कसैलाई १ सय डिग्री भन्दा माथि ज्वरो आएको छ भने उनीहरुलाई छुट्टै आईसुलेसन जस्तो ठाउँमा राखेर परिक्षा दिन लगाउनेछौ ।
१०. बिद्यार्थीहरुलाई पुर्णरुपले परिक्षाको तयारी गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ ?
हजुर सबै बिद्यार्थीलाई तयारि गर्न आग्रह गरिरहेकै छौ । हामीले करिब करिब परिक्षाको लागि सम्पुर्ण तयारि गरिसकेका छौ । परिक्षा गर्न आवस्यक रहेकोले अर्को निर्देशन बनेन भने हाम्रो बिद्यालय परिक्षा लिन तयार छ ।
धरानको पुरानो ईतिहाँस बोकेको स्कुल भनेर पनि चिनिन्छ थोरै यसको ईतिहासको बिषयमा बताईदिनुस न ।
यस बिद्यालयको ईतिहास राणाकाल देखिनै जोडिएको छ । यसको शारदा नाम रहनुमा पनि बेग्लै महत्व । शारदा शमशेर चाहिँ त्यत्तिबेलाको यहाँको वडा हाक्किम थिए । शारदा शमशेरको नामबाट स्कुलको नामाकरण गरिएको हो । धरानको पुरानो हुलाकमा ३ जना महिलाहरुबाट पढाउन सुरु गरिएको थियो । त्यत्तिबेला पुरानो स्कुल पब्लिक हाई स्कुलम पुरुष हरुलाई मात्र पढाउँथे ।त्यसपछि धरानकै शैेक्षिक अगुवाहरुले महिलाहरुलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले शारदा बालिका नाम दिएर निशुल्क पठनपाठन सुरु गरेका थिए ।
११. नमुना चाहि किन राखियो ?
पहिले २०३३ र ०३४ सालतिर विशेषत नयाँ शिक्षा लागु भएको बेलामा खाद्य प्रविधि,बिज्ञान लगायतका विभिन्न शिपमुलक बिषयहरुको पठनपाठन हुने गरेकोले गर्दा बिद्यालयलाई नमुनाको रुपमा दिएको भन्ने कुरा छ ।
१२. शारदा माविलाइ उत्कृष्ट बनाउन भावी योजना कस्तो छ ?
अब बिद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउने कोशिस गरिरहेका छौ ।
बिज्ञान प्रयोगशालाको निमित्त धरान उपमहानगरपालिका शैक्षिक विभागले २–३ वटा बिद्यालयहरु पढाईरहेका छन् । त्यस्तै हाम्रो बिधालयमा पनि त्यो चलिरहेको छ । हामीसङ्ग बिज्ञान सामाग्रीहरु पनि काफि नै छ । त्यसलाई अलिकत्ति व्यवस्थापन गर्न मात्र बाँकि छ । बिद्यालयमा आईटि ल्याब पनि छ। जुन कक्षा ६ देखि ८ सम्मकालाई यसको कक्षा दिईरहेका छौ । अहिले महिलाहरुलाई पनि प्राविधिक शिक्षातर्फ लानुपर्छ भन्न्र हिसाबले योजनाहरु तयार गरिरहेका छौ ।
खेलकुदको निमित्त हुन सक्छ भने सबै हिसाबले खेलकुदका आधारभुत पक्षहरु हामीसङ्ग हाम्रो परिसरभित्रै प्रयाप्त छ । त्यसको लागि केहि पुर्वधारहरु पनि तयार गरिसकेका छौ । टाढा –टाढाबाट बिद्यार्थीहरु पढन आउने भएकोले उनीहरुका लागि होस्टेल को पनि व्यवस्थापन गरेका छौ । तर अहिले हाम्रो होस्टेलको क्षमता कम्तिमा पनि २४ जना बिद्यार्थी राख्न सक्ने खालको रहेको छ । यसलाई कमसेकम ५० सम्म पर्न सके राम्रो हुने थियो । यसको लागि पनि पहल भईरहेको थियो । तर कोभिडले सबै प्रोजेक्टहरु पुरा गर्न दिएन । कोभिडले कम्तिमा पनि बिद्याललाई ४० लाख जत्ति घाटा भयो ।हामीले होस्टल तयार गर्दै थियौ ।
त्यसमा १५ लाखको कुरा हामस्ले पाउन सकेनौ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत २५ लाखको प्रोजेक्ट हामिले लगाएका थियौ । त्यो पनि कोभिडकै लागि खर्च भयो । तर त्यो भन्दा पनि अहिले शैक्षिक सत्र नै कसरि पुरा गर्ने भन्ने समस्या रहेको छ ।